Iko kumanikidza kuri! Shonnie Lavendar, Blog Coach, andibvunza kuti tip blog rake - Wangu Blog Murairidzi: Gonesa iyo blog yekufunda curve nemurairidzi Shonnie Lavender! Ndakafunga kumbomira ndoita zvekuverenga pane saiti yaShonnie uye ndinofara kuti ndakazviita!
Zvingavewo zvisina tariro kwandiri kuti nditaure chero chinhu pamusoro pezvakagadzirwa naShonnie. Maitiro ezvinyorwa, kudzikisira zvemukati, uye kushandiswa kwehushingi, font, makotesheni, blockquotes, mabara ane zvinyorwa ... wow, zvese zvakakwana. Ndiri kuzotevera blog yaShonnie kunotora matipi uye manomano ekunyora zvirinani zvirimo uye kuzviratidza mushe.
Ini ndinoda hwakawanda hwesita yako saiti. Yakanga isiri iyo kusvikira ini ndasvika paNe peji peji apo ini pandakanyatsoona hunhu hwako, zvakadaro. Iyo siginecha izano rakanaka! Inoratidza hunhu. Kana iwe uchinge wawana kuverenga chero ezvangu zvinyorwa, ini ndinofunga pachedu pikicha yakakosha chiuru zvinyorwa (doh!). Izvo zvakati, ndakave nekakavhiringidzika ndichitarisa kumusoro wako mufananidzo. Ndakanga ndisina chokwadi kana icho chaive chakamiririra.
Kupenya kwekubwinya kweZvakafanana Mapositi uye Zvekupedzisira Zvinyorwa. Ndingakurudzira kufambisa Zvako Zvazvino Zvinyorwa kumusoro padivi rako repazasi pasi peRunyorwa ruzivo, zvakadaro. Rangarira kuti vanhu vazhinji havazomhara pane peji rako repamba, ivo vanowana chinyorwa kuburikidza neinjini yekutsvaga uye ivhu pane imwe yemapeji ako epositi. Kana iwe ukatarisa kuruboshwe, kazhinji yenguva Dzako Dzazvino Zvinyorwa dzinowira pasi pasi pazasi pekupera kwechinyorwa. Ini ndaikurudzira kuzviisa mumutsara nevanhu 'ndima yekuona.
Dingindira rako rakavakwa zvakanaka. Ndingakurudzira zita rako reBlog kuti rive mune h1 yekumusoro tag, yako mapositi ive mune h2 yekumusoro tag ... uye iwe unomwaya yako misoro yemusoro mune ako mapositi ane h3 mateki. Nyanzvi dzakawanda dzeSEO dzinobvumirana kuti Injini dzekutsvaga dzinoisa index zvichibva nekwauri uye nemashandisiro auri kuita ma tag emusoro! (Asi ivo zvakare vanobvuma kuti h4 pane ine zvishoma kana haina maitiro.)
Ndakaona mamwe mafonti madiki, kunyanya mubara repadivi. Kunyangwe ichikwana aesthetically, ndinoshamisika kana vashanyi vane zvihombe resolution uye monitors vangangoda kukwenya maziso kuti vaone zvemukati. Zvinotoshamisa kuti, ndinorangarira apo munhu wese aichinjira kumafonti madiki. Iye zvino ndiri kuvaona vachienda kumafonti akakura ane yakawanda chena nzvimbo. Copyblogger muenzaniso wakatanhamara. Ini pachezvangu ndakawedzera saizi yangu yemafonti pane yangu blog uye, kunyangwe ndisina chero humbowo, ndinotenda yakavandudza saiti.
Vafudzi vanowanzo gadzira kumatunhu machena. Chimiro chako chemamiriro chakacheneruka zvachose. Ini ndinofunga zvingave zvakakosha kuyedza kashoma kumashure kara padivi rako rerutivi uye pamwe dhizaini kana kumashure pane yako blog rese peji kumashure. Kungori chikafu chekufunga! Ini handifunge kuti irikuita chero chinhu kukuvadza blog yako, ndezvekuti kana iwe uchida kutarisisa kuve pazvinyorwa zvako uye kwete kudzungaira - saka zvimwe zvishoma misiyano mumavara zvinogona kubatsira!
Kutenda zvakare nemukana unoshamisa kudai. Ndiri kunzwa kunge hwiza huri kuedza kutora dombo kubva muruoko rwatenzi! Ndinovimba unokoshesa mhinduro.